इमर्जिङ्ग नेपालको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट , लगानीकर्ता मालामाल
साताको चौथो कारोबार दिन बुधवार इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको शेयरमूल्यमा सकरात्मक सर्किट लागेको छ ।
समाचार तयार पर्दा सम्म कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९८ प्रतिशत वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । सकारात्मक सर्किटलागेर कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४७२ दशलमव ६० पुगेको छ ।
कम्पनीको हिजो रू. ४२९ दशलमव ७० मा अतिम कारोबार भएको थियो। कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयरमूल्य बढेको हो । मार्केट डेप्थमा हेर्दा कम्पनीको शेयरमा १ लाख ६४ हजार ८सय ६९ कित्ता शेयर खरीद माग रहेको छ भने विक्री माग शून्य रहेको छ ।